आइपिएलमा अनुबन्धित सन्दीप को हुन ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»खेलकुद»आइपिएलमा अनुबन्धित सन्दीप को हुन ?
आइपिएलमा अनुबन्धित सन्दीप को हुन ?
By सन्दीप खत्री on १४ माघ २०७४, आईतवार १०:०७ खेलकुद
काठमाडौं, माघ १४: नेपाली युवा खेलाडी सन्दीप लामिछानेले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल खेल्ने पक्का भएको छ । आइपिएलको बोल कवोलको दोस्रो दिन सन्दीप लामिछानेलाई दिल्ली डेयर डेभिल्सले २० लाख भारतीय रुपैयाँमा किनेको छ । सन्दीप आइपिएल खेल्ने पहिलो नेपाली खेलाडी पनि बनेका छन् ।